October 2014 - DVB Multimedia Group
About the next debate:Government Promise
· by DVBDadmin · 30 Oct, 2014
Next on DVB Debate:Sexual Harassment
အမျိုးသမီးတွေအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှုတွေဟာ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါပြီ။ ဒီမိုကရေဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာတောင် အမျိုးသမီး ၅ ယောက်မှာ တစ်ယောက်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စော်ကားခံရတယ်လို့ CDCP Centers for Disease Control and Prevention စစ်တမ်းအရသိရပါတယ်။ အမေရိကန်တွေကိုယ် တိုင်တောင် ပြည်သူတွေကြားမှာ လိင်ပိုင်းဆိုရာနှောက်ယှက်စော်ကားခံမှု ဒီလောက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်နေမယ်မထင်ထားခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထွန်းကားတဲ့ ဟီရိသြတ္တပ္ပ အရှက်အကြောက်ကြီးမားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း...
· by DVBDadmin · 25 Oct, 2014
Highlights from the PR Debate
Highlights from DVB Debate’s ELECTORAL SYSTEM show “IS Burma ready foraPR system?” 25/10/2014 ————————————————- “အနိုင်ရသူ အကုန်ယူစနစ်မှာက အနိုင်နဲ့အရှူံးပဲရှိတယ်. အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်မှာ အရှူံးမရှိအနိုင်ရစနစ်(win win system)ဖြစ်တယ်. ဒီစနစ်နဲ့သွားရင် မဲထည့်တဲ့ ပြည်သူက သူတို့မဲပေးချင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အတွက် သူတို့ရဲ့ မဲတပြား အလကားမဖြစ်တော့ဘူး” ဦးသုဝေ –...
· by DVBDadmin · 23 Oct, 2014
Next on DVB Debate:PR system
လာမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ် (PR) ကို ကျင့်သုံးဖို့ NDF ပါတီက အမျိုး သား လွှတ်တော်မှာရော ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပါ အဆိုပြုတင်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ PR နဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အကုန်လုံး လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ပြီးတော့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပိုပြီး တော့ အာမခံချက်ရှိမယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကို လွှတ်တော်မှာ လက္ခံဆွေးနွေးဖို့ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ တပ်မတော်သားအမတ်တွေနဲ့ အာဏာရ...
· by DVBDadmin · 18 Oct, 2014
Highlights from the SIM Cards Debate
Highlights from DVB Debate’s SIM CARDS show “Do you like your new SIM?” 18/10/2014 —————————————— “နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေအနေနဲ့ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသကလူတွေကိုလဲ မေ့မထားသင့်ဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ လုပ်လို့ရတာက ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးဈေးကွက်က ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသမှာ တာဝါတိုင်တွေစိုက်တာမျိုးလုပ်ပေးပြီး အကျိုးရှိအောင် အသုံးချသင့်တယ်။” ဦးနန္ဒစိုး – ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ၊ အင်ဂျင်နီယာချုပ်(Radio...
· by DVBDadmin · 17 Oct, 2014
Press kit: SIM CARDS
Facts & figures on the new telecommunications entering Myanmar: • Just 12.3 percent of the population now has access toabasic mobile phone. • Qatar based Ooredoo, launched services on August 2nd. • Norwegian...
Next on DVB Debate
DVB Debate Cartoon: Climate Change
What should we learn from Nargis?
The making of DVB Debate
On DVB Debate
This week’s DVB Debate
Do the Debate Survey
Debate Highlights: Civil Military
Press Kit: Media Reform
Press Kit: Facts & Views
Doh Pyay Doh Myay
Talk2DVB